अवरुद्ध साँफे मार्तडी सडक अझै सञ्चालनमा आएन : के भन्छन् सडक डिभिजन प्रमुख बिष्ट ? – Bannigadhi Today
अवरुद्ध साँफे मार्तडी सडक अझै सञ्चालनमा आएन : के भन्छन् सडक डिभिजन प्रमुख बिष्ट ?
धनराज साउँद २०७८ भदौ ३१, बिहीबार ०७:०६
वर्षाका कारण साँफे मार्तडी सडक अवरुद्ध भएसँगै बाजुराका नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको छ ।
वर्षाले अवरोध पारेको साँफे मार्तडी सडक खण्डमा जोखिम मोलेर कोरोना विरुद्धको खोप ढुवानी भइरहेको छ । पहिरोको जोखिमका बिच खोप ढुवानी गरेर जिल्ला खोप केन्द्रमा खोप लगाउने काम भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।
अविरल वर्षाका कारण जिल्लाको मुख्य लाइफलाइन साफे मार्तडी सडक, मार्तडी कोल्टी लगायत सबै स्थानीय सडक अवरोध भएकोले भौगोलिक रूपले विकट बाजुरामा कोरोनाविरुद्धको खोप ढुवानीमा समस्या भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख दयाकृष्ण पन्तले बताउनुभयो ।
सडक खण्डको बल्दे द्वारी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम मोलेर खोप ढुवानी भइरहेको छ । बाजुराको मुख्य राजमार्गको रूपमा रहेको साँफे मार्तडी सडक अवरोध हुँदा बाजुराको दैनिक कठिन बन्दै गएको छ । साँफे मार्तडी सडक अवरोध हुँदा बाजुरामा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीका साथै औषधीहरू पनि मान्छेले जोखिम मोलेर सदरमुकाम पुर्‍याउनु परेको हो ।
साँफेबगर–मार्तडी–कोल्टी सडक अन्तरगत पर्ने बल्दे–अम्कोट सडक जेठ ३१ मा अवरुद्ध भएको र अझै खुल्न सकेको छैन । निरन्तर बर्षा भइरहेकोले सो सडकमा डोजर र एक्स्काभेटर चलाउन नमिल्ने भएकाले सो सडक सुचारु गर्न अझै मुस्किल भएको सडक डिभिजन कार्यालय अछामले जनाएको छ ।
यसै बिच आज हामीले अवरुद्ध साँफे मार्तडी सडकका विषयमा सडक डिभिजन कार्यालय अछामका प्रमुख इन्जिनियर दमन बहादुर विष्टसँग कुराकानी गरेका छौ ।
कुराकानी : दमन बहादुर बिष्ट